Cimiladu waxay soo jeedinayaan 5 Qalabka Calaamadsan Shabakada ugu Fiican
Webka xoqitaanku waa nidaam dhib badan oo xaqiijinaya fiirinta xogta tayada internetka oo waxay ka qaadataa macluumaadka faa'iido leh ee dadka isticmaala. Laga yaabee inaysan suurtagal ahayn in la helo habboon shabakad ah barnaamijka ama qalabka maaddaama ay jiraan fursado badan oo halkaa ka jira. Si kastaba ha noqotee, barnaamijyada qaarkood waxay u baahan yihiin xirfado farsameed oo farsamo inta ay kuwa kale qaali yihiin, ayna ku habbooneyn bilawga.
Halkan waxaan ka wada hadalnay 5 barnaamijka ugu fiican ee shabakadda adeegsiga shabakada ganacsiga iyo kuwa aan ganacsiga ahayn.
Ficstar waa adeeg internet oo awood leh oo aan u baahneyn inaad isku dardarto oo aad cusbooneysiiso xogta qadida gacanta. Taa baddalkeeda, waxay tilmaamaysaa, falanqeynaysaa, oo waxay abaabushaa macluumaadka adiga kugu habboon: kadibna waxay isku dheelitiraan oo is barbardhigaan badeecooyinka iyo adeegyada ilaha internetka ee kala duwan. Isticmaalida Ficstar, uma baahnid inaad hubiso diiwaanada ama isku xidhka xogta macluumaadka maadaama ay sameyn doonto wax walba oo ku saabsan sida leylisyada iyo shuruudahaaga. Laga soo bilaabo e-ganacsiga iyo bogagga dukaameysiga ee khadka tooska ah, barnaamijkani wuxuu soo saari karaa dhammaan noocyada xogta, noo ogolaanaya inaan aragno natiijooyinka dhamaystiran oo aan wax maalgashi ah lahayn.
iWeb waa qalab fiican oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay dadka isticmaala ganacsiga iyo kuwa aan ganacsiga ahayn..Waxay noo ogolaanaysaa inaan soo jeedino website-ka ama blog-ka, qiimeyno qeexitaanka soo-saaridda, hubinta iyo qiimeynta tayada, oo bixiso khidmadda marka shaqadayada loo qabto sida rabitaanka iyo rajooyinka aan rabno. Haddii aad tahay bilowga, uma baahnid inaad ka welwesho qiimaha ay iWeb kuugu kici doonto wax ka badan $ 40 bishiiba. Waa mid ka mid ah macdanta xogta ugu fiican iyo qalabka wax soo saar ee internetka.
TheWebMiner dhab ahaantii waa shirkad duuban oo shabakad ah oo soo bandhigtay barnaamij isku mid ah. Barnaamijka awooddani wuxuu hirgeliyaa xog aad u ballaadhan saacad kasta, wuxuuna bixiyaa adeegyo otomaatik ah iyo adeeg tashiilaya dadka isticmaala. Ayadoo aan loo eegin nooca xogta aad u baahan tahay, TheWebMiner ayaa hubaal ka dhigi doona waxa laga filayo. Laga soo bilaabo hal mar macluumaadka saarista xogta ilaa warbixinnada maalinlaha ah ama cusbooneysiinta ku saabsan tartamayaasha suuqa, software-kani wuxuu ku siin doonaa nooc kasta oo macluumaad ah. Qaar ka mid ah xulashooyinka ugu fiicani waa tusayaal tirakoob, xog-ururiye xog ah, iyo aqoonsiga is-barbardhiga.
Sida shabakadda TheWebMiner, WebSundew waa barnaamij hagaagsan oo awood leh oo la yaab leh oo loogu talagalay ujeedooyinka ganacsiga iyo kuwa aan ganacsiga ahayn. Waxay ka caawisaa xogta laga soo qaado bogagga internetka oo leh xawaar sare iyo wax soo saar. WebSundew wuxuu noo ogolaanayaa inaanu nadiifinno nidaamka saaridda macluumaadka isla markaana wuxuu ku kaydiyaa macluumaadka internet-ka iyo xayeysiinta. Macaamiisha barnaamijkani waxay og yihiin in WebSundew ay ururin karto, lafagurayso iyo xoqin karto bogag badan oo internetka ah iyada oo aan la isticmaali karin xirfadaha codka. Darcy Ripper: